I-Petrol Leaf Hoover - iSearch
Qala ingadi Amathuluzi engadini namathuluzi engadini Uphethiloli leaf cleaner
0.1 I-petrol booth vacuum cleaner 2017
0.2 Kufanele ukwazi nge-petrol vacuum cleaner
0.3 Ukuncishiswa ngamazinga omsindo ezindaweni zokuhlala
0.4 Amandla we-petroleum vacuum cleaner
0.5 I-fan fan-vacuum cleaner uma kuqhathaniswa
0.6 Ukusebenza kwe-vacuum cleaner
0.7 Yini ongayithenga?
0.8 I-Ergonomic vacuum cleaner
0.9 Ukusebenza ngokulandelana nokuqhuma ukusebenza
0.10.1 Izinzuzo nezinkinga
1 Kuphi ukuthenga i-petroleum vacuum cleaner?
1.0.1 Ukuthenga ku-Intanethi
1.2 Ukuthenga noma ukuqashisa - kuyini inengqondo?
I-petrol booth vacuum cleaner 2017
Ungalondoloza isikhathi esiningi nomzamo nge-cleaner vacuum cleaner. Bahlome enye Iphethiloli noma imoto kagesi, Ngokuqondile, i Uphethiloli leaf cleaner izinzuzo ezinhle. Ukwaziswa kwethu kuzokusiza ukuba uqondisise umhlaba wamahlamvu. Senza amasha, isibonelo Ubuchwepheshe, ukwazi-njani, imisebenzi futhi amaqhinga wokonga ngaphambili. Ngale ndlela, nawe ugweme ukuthengwa okungahleliwe. Uma ubuza umbuzo Uphethiloli leaf cleaner siyazi futhi esinye iseluleko noma esinye iseluleko kuwe.
Kufanele ukwazi nge-petrol vacuum cleaner
leaf Blower okokuqala wahlangana namabhizinisi ezentengiselwano. Izindawo ezinkulu zazicacile ngaphezulu ngokweqile futhi ugcine isikhathi kanye nabasebenzi. Namuhla kunemakethe enkulu futhi abasebenzisi ekhaya, Ngala madivaysi, kungenzeka futhi ukuhlanza ngokushesha futhi ngempumelelo izingadi ezincane noma izindawo zothuli, amaqabunga noma ezinye izinto ezingcolile ezinesisindo esincane. Yiqiniso lokhu kuya nge-a umshanelo noma hala, Noma kunjalo, ubukhulu bendawo noma imvamisa edingekayo yomsebenzi kungaba uphethiloli-leaf Blower ngokushesha wenze kube nenzuzo. Abantu abadala noma abantu abanokulinganiselwa ngokomzimba, ukusebenzisa njalo umshanelo noma i-rake kungase kube nzima noma kungenakwenzeka. Akukho ukukhanya ngaphandle kwemithunzi ngakho-ke ngaphezu kokuthengwa kwentengo ephakeme futhi nokusetshenziswa kokungalungi. Izinga lomsindo yilokuqala. Uma kwenzeka ivolumu, okungenzeka ngezinye izikhathi ibe ngaphezu kwe-100 decibels, kunconywa ukuvikelwa indlebe. Yiqiniso, umsindo uphinde ubonwe omakhelwane, abaphazamiseka ngokushesha. Iphinde ifake i-Sauger ngokwemvelo konke okuhambelana namandla ayo okulanda. Amatshe amancane avela emgodini we-gravel afana kakhulu nasesikhwama sokubamba njengezilwane ezincane, isibonelo ama-frogs, izinambuzane noma izinkila.
Ukuncishiswa ngamazinga omsindo ezindaweni zokuhlala
Izinga lomsindo ophezulu, kanti okungenani umsebenzisi angazivikela ngokuvikelwa kwezindlebe, akakwazi ukubiza omakhelwane abacasulile kuphela ohlelweni, kodwa futhi uhambisana nomthetho wokuvikela umsindo nomshini. Lokhu kubangela imingcele uma amadivaysi anomsindo wokukhipha umsindo angasetshenziswa. Abashayeli bamaqabunga asetsheni futhi Abaqoqi bamahlamvu angeke iqhutshwe ngeSonto noma ngamaholide omphakathi nganoma yisiphi isikhathi. Ngezinsuku zebhizinisi, sebenzisa phakathi kwe-13 ne-15 iwashi, ngaphambi kwewashi le-9 ekuseni nangemva kwewashi le-17 kusihlwa akuvumelekile. Ukungafani kwezicelo zezohwebo kungenzeka. Kukhona nesibopho somkhiqizi sokudalula izinga lamandla wezwi ku ama-vacuum ahlanzekile, okuyinto akumele idluliswe. E-US umshini wokuhlanza umshini ngenxa yomsindo ophezulu okhishwayo.
Okuwusizo a leaf Blower, uma i-blower ingabuye ishintshwe ukuze iqhume. Lokhu kuvumela uthuli, ukungcola nokushiya ukuthi kungabhekwa kalula ezindleleni nasezindaweni ezinkulu. Kulesi simo, ububanzi bokugeleza komoya yi-multiple of the power of suction. Akudingekile ukucubungula imitha ngayinye ngayinye, kodwa ungashesha ukuhlanza amakhulu wamamitha square. Nalokho futhi ndawonye abagcwele kuya izinqwaba ezinkulu, okungahle zivele zisondele, zigcine isikhathi esiningi nesisebenzi. "Abahlanzekile abavaliwe" engadini baye babhekana ne-boom kusukela eminyakeni ye-90, futhi baqhubeka beguquka. Ima namhlanje ngesandla elawulwa kanye nemishini okufanele igqoke ngemuva. Ngaphandle kwamamodeli aguquguqukayo umsebenzi ekushayweni kukhona nokubulawa ngaphandle ukuncela, Lawa madivaysi afaneleke kakhulu uma amahlamvu kufanele aphikiswe kancane. Kodwa ngisho nezinqwaba ezivuthayo kalula ziqoqwe ngesandla. Ngaphezu kwe Uphethiloli leaf cleaner nazo zinemishini motor kagesi iyatholakala. Lawa angasetshenziswa amandla amakhodi noma amabhethri avuselelekayo. Isizukulwane somsindo namanje sikhulu kakhulu kuma-electromodel.
Amandla we-petroleum vacuum cleaner
Amandla amaningi kunalokho onobuhle kagesi ukwenza Uphethiloli leaf cleaner, Ezindaweni eziphakathi kuya ezikhungweni ezinkulu ziza namahlamvu amaningi kuye ngokuthi isihlahla sabantu. Lapha Uphethiloli leaf cleaner onke amandla abo. Emaqabunga ngaphansi kwamahlumela nezihlahla akukho ukuphazamiseka kwamandla okuphazamisa, njengama-hood amahlamvu kagesi ngaphandle kwebhethri. Ama-Motors avela ku-1 PS phezulu, ngokuvamile i-2-Takter leaf vacuums le ndaba ilandelwe kalula wayichoboza futhi ungene e-fangsack. Amamodeli amaningi avumela isisindo (isisindo esingenalutho esingu-5-8 kg) ukuze sithathwe ngendwangu yehlombe. Okuqukethwe kwe-catch kanye ne-petroli kuhlanganisa nesisindo. Ngokusondeza kanye / noma ukukhishwa kwe-blower, amadivayisi amaningi angafakwa kuwo Izinyathelo, Izindleko ezingeziwe zilula ukusebenza ngisho nakwezinye izindawo. Through a ukuhlanganiswa kokuhlanganiswa kweyunithi umthamo wezinto ezisondelwe zingancishiswa ku-16: 1. Lokhu kwenza kube lula ukusebenza isikhathi eside ngaphambi kokuthi isikhwama sokugcoba sikhishwe. Ngaphezu kwalokho, kulahlwa noma Composting, okuyinto iqhubekela phambili ngokusheshisa nge-comminution, idinga indawo encane kakhulu. Amanani anengqondo Uphethiloli leaf cleaner nge-electromodels (cishe nge-90-600 Euro) futhi kusekhona izindleko zesondlo. Zizimele ngaphandle kokuxhuma amandla futhi zanikeza amandla amaningi. Ziyinkimbinkimbi nakakhulu kune injini Electric Leaf Blower.
I-fan fan-vacuum cleaner uma kuqhathaniswa
Izinsalela ezimbalwa ze-a Uphethiloli leaf cleaner wezindlu kukhona ngesikhathi esifanayo izinzuzo ze-electrium vacuum cleaner. Ayishibhile, anesisindo esincane futhi angabi nakakhulu. Abashiseli uphethiloli futhi bakhiqize akukho mafutha okuqeda, Akudingeki ukuba uphumelele futhi injini akudingeki iqalwe, isebenza ku-push of a inkinobho. Kuye ngesibonelo, ukusetshenziswa kwamandla kuhluka phakathi kwe-1kw (1000 Watt) no-3kw (3000 Watt). Izigaba zamandla eziguquguqukayo ezihlukene zivame ukutholakala kuye ngemishini. Lokhu kuvumela a ukulungiswa okuhle ezimweni zokusetshenziswa. Ngamamodeli wokuxhumeka kwamandla, ikhebula lesandiso elihambisana nobukhulu bezwe kufanele litholakale. Ama-fan fan kagesi ngamabhethri avuselelekayo anezinzuzo ezifanayo njengamamodeli wokunikezwa kwamandla, kodwa ngenxa yebhethri isisindo esincane kakhulu. Awudingi ukuxhumeka kwamandla okusebenza kwakho, kodwa ibhethri kumele ikhokhiswe ngokunikezwa kwamandla ngokushesha uma ingenalutho. Lokhu kusho ukuthi banesikhathi esilinganiselwe kuphela. Amanye amadivayisi asebenzisa, isibonelo, ibhetri ye-lithium-ion ye-18 V. Lokhu kunikeza isikhathi sokusebenza semaminithi angu-10 cishe. Ungenantambo leaf izimpimpi zifanelekile kakhulu izindawo ezincane, ezihlanjululwa emaminithini ambalwa. Kukhona ukuhlanza okusetshenziselwa ukuhlanzwa kwebhethri okungenazizindleko phakathi kwe-35 ne-300 Euro.
Ukuhlanza i-vacuum yokusebenza kwebhethri kunesikhathi esifushane sokusebenza (cishe imizuzu engu-10) ngaphambi kokuthi ilayishwe kabusha. Ezindaweni ezinkulu, kungase kube usizo ukuba nebhethri elilodwa elibekwe icala elitholakalayo. Ngakho kulula ukushintsha futhi umsebenzi akudingeki uphazamiseke isikhathi eside.
Ukusebenza kwe-vacuum cleaner
a leaf Blower idinga umphumela wokususa, lapho amaqabunga nezinye izinsalela zingasondliwa. Umphumela wokuluthwa ukhiqizwa yi-blower, eqhutshwa yi-motor. Le injini ingaba yi-petroli noma imoto kagesi. I-blower ifaka umoya ekuvuleni kwangaphambili kwenqwaba yokudla futhi iyifinyelela ngaphandle kwe-air-tight isikhwama Dabula. Kwamanye amamodeli, i-chopping unit ingaphakanyiswa futhi nayo iqhutshwa yi-motor. Umoya ubalekela e-fang, okuyilapho izinhlayiya ezinkulu lisiphatheleni. Ama-canopies amaningi anethuba lokuguqula ukugeleza komoya. Lokhu kubangela umoya kuze kufike ku-400 Km / h kusukela ekudleni okuningi, okwenza ukuthi i-unit isebenze njenge leaf izimpimpi isebenza. Abafaki be-Leaf bafika emakethe eminyakeni engu-80 futhi babehlome izinjini ze-petroli. Namuhla, izinhlobo eziningi ezinama-motors kagesi nazo ziyatholakala. Ngaphezu kwamadivayisi wokuxhumeka kwamandla, kukhona namadivayisi anakho amabhethri, Amamodeli ngezinjini zephethiloli anamandla kakhulu. Zifaneleka kangcono imishini enezinhlanzi ezinamandla futhi ikakhulukazi efanelekayo izimo zokusebenza ezinzima isibonelo uma amahlamvu kufanele asuswe ngaphansi kwezihlahla nezihlahla.
Lapho ukhetha fanololine, futhi ucabange le edingekayo uphethiloli canister kanye nokugcina uphethiloli. Imithethonqubo yokuvikelwa komlilo kumele ibonwe.
a leaf Blower kufanele kuthengwe ngokwephrofayela yesicelo. Ukuze uhlanze imigwaqo noma ngisho nezindawo ezihlala flat, amadivayisi amancane asevele afanelekile. Lezi zingabizi futhi zilula. Izindawo ezikhudlwana nezimo zokusebenza eziyinkimbinkimbi kakhulu, imishini enamandla ingcono kakhulu. Uphethiloli leaf cleaner kanye namamodeli kagesi anemishini egunyazwe ngamandla e-horse kanye kW ngokulandelana. I-1kW ihambelana ne-1,36 PS. Amandla aphakeme, amandla amaningi anayo. Ukwengeza, idatha ye-velocity emoyeni kanye nevolumu yomoya ivame ukunikezwa. Iyatholakala kubasebenzisi basekhaya Uphethiloli leaf cleaner ngokuvamile zihlome izinjini ezimbili, izinjini ezinkulu ezinamandla ezine ezisetshenziselwa ukusetshenziswa kochwepheshe.
I-Dolmar 701252350 i-vacuum cleaner vacuum PB-252.4 V i-0.81 kWDisplay
Injini ye-Petrol 4
OHV injini hlobo
Ukuhambisa: i-24,5 cc
I-Power 0,81 kW (1,10 PS)
I-Ergonomic vacuum cleaner
Amadivayisi anamandla angakwazi ukuhlangabezana cishe nanoma imiphi imfuneko. Noma kunjalo, amadivaysi kufanele afanelwe izimo zokusebenza. Endaweni encane enzima Uphethiloli leaf cleaner ukuthenga bekuyobe sekudlulile ngaphezu kwehlongo. Amadivaysi amancane akhona Ukugunda futhi ngaphezu kwakho konke kulula. Ukuphindaphinda kokusetshenziswa kufanele kucatshangelwe. Uma ungafuni ukususa amaqabunga ensimini, ungaphatha futhi idivayisi encane, uma kuthatha isikhathi eside. Ama-fan-blade amakhulu kufanele akwazi ukuqhutshwa ngemuva ngenxa yesisindo.
Ukusebenza ngokulandelana nokuqhuma ukusebenza
Amandla okulwela aboniswa ngamamitha ayi cubub of air ngomzuzu, phakathi kwe-7 ne-16 cubic metres. Kanjalo kunjalo amahlamvu amakhulu in isikhathi esifushane ukubhekana nesimo. Uma ukugeleza kwe-air kuguqulwa futhi i-unit isebenza njengomshayeli, ijubane lokugeleza komoya likhonjisiwe. yesimanje Uphethiloli leaf cleaner ingaveza ukuhamba kwe-air kuze kufike ku-400 km / h.
Ubungakanani besikhwama noma isitsha, njengombuso, sivumelaniswa ukuze kusetshenziswe idivayisi. Okukhudlwana, isikhathi eside ukukhipha kungasuswa. Amamodeli amahle anamandla okungenani amalitha angu-35.
Amadivayisi amancane, afakwe futhi a ehlombe ukusabalalisa isisindo, ukunciphisa umthwalo ngemuva. Amahora okudambisa ama-raking, ukujula nokuqoqa amahlamvu akudingekile. Izindlela nezinyathelo zamaqabunga kanye nemfucumfucu eminye kufanele zisetshenziselwe ukuphepha. Ngesinye Uphethiloli leaf cleaner noma eyodwa i-vacuum cleaner kagesi utshani lungasuswa amaqabunga. Ukuhlanza utshani kunconywa kakhulu ngaphambi kwebusika ngalinye. Omunye Motorisierter kodwa futhi kunezinselelo okumele zamukeleke. Ngaphandle kwentengo yokuthenga, amaqabunga ephethiloli adinga nokugcinwa kwesondlo, okubandakanya izindleko. Ukusetshenziswa kwamadivayisi kuveza umsindo, okusho ukuthi angasetshenziswa ezindaweni zokuhlala kuphela ngezikhathi ezithile. Ngeke isetshenziswe ngeSonto noma ngamaholide omphakathi. Futhi hhayi ngaphambi kwewashi le-9 nangemva kwewashi le-17 hhayi phakathi kwe-13 - i-15 iwashi. Izilwane ezincane nezinambuzane zingasetshenziswa. Uphethiloli leaf cleaner azigcini nje kuphela kunamamodeli kagesi, kodwa futhi zikhiqiza imfucuza yokuqeda.
Kuphi ukuthenga i-petroleum vacuum cleaner?
Once the leaf Blower ngokuyisisekelo esitolo se-hardware noma kumthengisi wendawo. Izitolo ze-DIY nempahla yezensimu Uphethiloli leaf cleaner ekusetshenzisweni kwabo. Kodwa kunezinye izindlela zokuthenga leyo divayisi. Ama-discounter models atholakalayo ngenkathi ekwindla. Lezi ngokuvamile ziyabiza, kodwa ngokuvamile lezi yizinto ezingekho igama. Ezingxenyeni zokuhweba zikagesi nazo zivame ukutholakala i-vacuum cleaner kagesi ekunikezeni. Ikhwalithi inenani layo futhi ngubani ovame ukusebenzisana nama-leafhoppers ngokuthembeka noma kufanele aziswe ngaphambi kokuthenga. Abakhiqizi abadumileyo bancike kwikhwalithi. Amanani akufanele abe ngokubiza ngokuzenzakalelayo uma uyazi ukuthi ungayithenga kuphi.
Okuthandwa kakhulu ukuthenga ku-inthanethi. Lapha amanani angalinganiswa ngokushesha futhi kalula. Ukuthola okulula kulula ukuthola, ngakho umkhiqizo womkhiqizo ungabizi kakhulu ukuthola. Inzuzo nge-Intengo yokuthenga i-intanethi iphinde isetshenziswe isikhathi esincane. Izikhathi zokushayela nokulinda okunzima ekuhwebeni ukwakhiwa akudingekile. Ulwazi olubalulekile mayelana namamodeli ngabanye nalo lwanele ukungena enetheni. Inzuzo ku-Intanethi yizinhlinzeko ezivame kakhulu kakhulu futhi okuyingxenye ephindaphindiwe yokufinyelela kalula komdayisi. Uma unenhlanhla, ungathumela imodeli yakho oyifunayo mahhala.
Uma ukhetha uhlanza amahlamvu avela kumthengisi wezobuchwepheshe, kufanele kusetshenziswe idivayisi phezu kwehlombe nebhande. Lena yindlela ewukuphela kokutshela ukuthi ngabe idivayisi inzima kakhulu noma i-strap ehlombe iphazamisa. Qinisekisa ukulungiswa okuhle kwebhande.
Ukuthenga noma ukuqashisa - kuyini inengqondo?
Uphethiloli leaf cleaner ingasetshenziswa unyaka wonke. Isibonelo ehlobo emva kwe utshani ugunda noma lapho emaphethelweni ashintshiwe nge-cutting cutter. Noma ubani onokwenza okunjalo zasengadini ine, ungakwazi Imigudu nezindawo bese uphinde uhlanzeke ngokushesha. Kodwa isiyalo esiyinhloko sifika ekwindla kuLaubfall! Amaqabunga amaningi awela emagqabeni, imibhede, izakhiwo nezindlela. Kungacasula, ngoba ngosuku olulandelayo umsebenzi uqala kabusha. Kungaba kuhle ukuwayeka alale phansi kuze kube yilapho wonke amaqabunga ehle. Noma kunjalo, lokhu akuvamile. Ngakho-ke izitidi nezindlela zishaywa indiva futhi zihlangene nomswakama, zingaba yingozi yengozi ngenxa yokukhwabanisa. Amahlamvu emahlamvu emaphethelweni angaphezu kwalokho engeza engozini yokungena. Ngakho umsebenzi uphindaphindiwe ngezikhathi ezithile kuze kube yilapho wonke amaqabunga ewile phansi.
Ngokuvamile akuzona kuphela izihlahla, ezihambisa amahlamvu endaweni. Umoya uphinde uvuthe amahlamvu kusuka kwelinye izwe, kanye namahlamvu akhe angakwazi ukuhlala nomakhelwane. Abantu abaningi bayisusa ngokushesha, lapho ukuphindaphinda njalo kungakha ukukhungatheka nokuphanga isikhathi esiphelele.
I-Leaf vacuum cleaner, futhi Uphethiloli leaf cleaner, ziba zithengeka futhi zinamandla kakhulu. Isikhathi nomzamo ukunciphisa la madivayisi kakhulu futhi ukusetshenziswa okujwayelekile akuseyona inkinga. Abantu abaningi basebenzisa lezi zinzuzo. Kodwa-ke, lo mbuzo uhlala ukuthi ukuthengwa kuyafaneleka noma ama-leaveshuffle aqashwa kuphela uma kunesidingo. Ngoba kungamandla kuphela Uphethiloli leaf cleaner kakade idinga izindleko zezimali, ngisho nangemva kokuthenga ngokusebenzisa isondlo. I-autumn yile kanye kuphela ngonyaka. Khona-ke, ikakhulukazi uma amahlamvu akudingeki asuswe masinyane futhi aqoqwe okwesikhashana, nje ukuqasha umshini wokuhlanza umshini kungase kube okunye okuhle. Isinqumo esiphakathi kokuqashisa nokuthenga ngokuvamile sinqunywa ngezidingo kanye nemvamisa yokusetshenziswa. Ngalokhu kubalwa, kubalulekile ukukhumbula ukuthi akuwona wonke umuntu ohlanza ukuhlanza intengo ephansi ogcina lokho okuthembisayo. Kukhona kakade ngamanani, okwehla ngisho nangaphansi kwezindleko zokuqasha nsuku zonke Uphethiloli leaf cleaner (mayelana no-15-45 Euro). Ngaphandle kwalokho, kungenza umqondo wokuthenga umphakathi. Omakhelwane abaningana bahlanganyela izindleko futhi wonke umuntu angahlanza insimu yawo nayo ekwindla. Kulokhu, izikhalazo ngomsindo omkhulu wokusebenza akufanele zilindeleke.
Ukukhangisa: I-Gasoline Vacuum Cleaner ithenga
FUXTEC professional likaphethiloli leaf Blower FX LBS126P leaf Blower chopper 3in1 umsebenzi kuhlanganise blowpipe 2tlg ukuncela + iqoqo isikhwama, anti-vibration umsebenzi -. Ngu decoupled kusukela isibonisi isibambo injini
Isici esikhethekile se-new semiprofessional fan-blower yilona umsebenzi wokulwa nezidakamizwa. Ngenxa yesithuthuthu esinesisindo esivela esibambini, ukudumaza kudivayisi kuyancipha nakakhulu! Ngakho-ke, amahlamvu atshaywa noma aphethwe, isibonelo, ngisho nangaphezulu kalula.
Ngu kufakwe blowpipe ukulethwa okuyinto bahlanza ku okuqinile / isizinda ibitume nje ngokuphazima kweso, ezifana ukusetshenziswa Blower doti emhlabathini elithambile, ukwenza isibonelo, ukubhekwa Rasenfläche.Das nishaye ipayipi lidlulisela umfutho womoya ukuba izinto, ngaleyo ndlela, isibonelo, amashidi bahlangene kushaywa ngempumelelo kakhulu ngaphezulu
Injini enamandla, kodwa okwezomnotho ifakwe tank enkulu (500ml) kunemishini yethu ehlukile. Ngakho-ke, ngokubambisana ne-60 l isikhwama esikhombisayo ngisho nangaphezulu nangaphezulu kokudlidliza kwesibambo, umsebenzi omude futhi osebenzayo uqinisekisiwe. Izimpande ze-Ergonomic kanye nesistimu ye-anti-vibration ithembisa ukusebenza ngokukhululekile.
Kwenzelwe air eyanele ukuze Laubsaugfunktion kuhlanganise design side iziketi, entsha ongaphakeme-ekushayweni EU2 injini - 25,4ccm³ ukufuduka, ukukhethwa eziqine kakhudlwana nangaphezulu izinga impahla kanye processing, nophethiloli ingxube 1: 40, carburetor nge futha eyinhloko, Big isikhwama kungasali nelincane ngoba ukuncela, omkhulu Häckselkralle metal bube manikiniki amahlamvu 12: 0
Ithiphu ye-FUXTEC: Ukuze sisebenzise kahle amadivaysi ethu ngendlela efanele futhi ehlala njalo, sincoma amafutha wethu asekuqaleni we-FUXTEC - Enziwe eJalimane.
McCulloch B-Laubbläser / -usuger GBV 345 00096-71.670.01View
I-GARDENA inikezela ngemikhiqizo ehlukahlukene yawo wonke umsebenzi ngaphakathi naseduze kwengadi
I-McCulloch emuva kweqabunga le-blower GB 355 BP, i-vacuum cleaner / i-blower enamandla we-1500 W motor, isivinini esishintshashintshayo, enesiphatho semumva (intwana n. 00096-70-887.01) isibonisi
Induduzo enkulu: umsebenzi wesikhwama sangemuva uvumela imoto ye-blower yamaqabunga ukuba iboshwe ngomhlane futhi iqale ukusebenzisa umqali wentambo
Ukusebenziseka okulula kokusebenzisa: Idivaysi ifakwe ngohlelo lokulwa nokudlidliza lomsebenzi wokukhathala ongakhathali. Isimo se-throttle esingashintshwa singashintshwa kalula
Ijubane lomoya eliguquguqukayo: Ijubane lishintshwa ngokushintshashintshayo, ukulawulwa kokuhamba ngesikebhe kuhlangene nomsebenzi omude futhi onethezekile
Ububanzi bokulethwa kuqukethe: 1x McCulloch emuva kwamaqabunga amaqabunga i-GB 355 BP (Item. 00096-70.887.01)
I-Bestseller cha. 4
I-Makita Petrol Ekhanyayo, i-ZMAK-BHX2501View
Eqinile futhi ehlala njalo
I-Black + Decker leaf blower ne-blower GW3030 nge-chopper, isikhwama esingu-50l nesibambo sesibili - ukushaywa okuguquguqukayo okuguquguqukayo kufinyelela ku-418km / h - 14 mction / min amandla wokufaka - ukusetshenziswa okusele emuva okunobungani
I-leaf blower ne-leaf vacuum eqinisekisayo ngekhono layo lokucubungula imfucumfucu engadini enkulu ngokukhululeka, ivuselela umquba ngokusebenza komzimba futhi yenza ukulahlwa kube lula
Iqine kakhulu: I-418km / h ijubane lokushaya, amandla we-14 m³ / min - Ukuvinjelwa okuguqukayo okuvumela ukulawula okulula phezu kwe-Blaster blaster
Ukhululekile: Ngenxa isikhwama iqoqo 50 litre umthamo, umsebenzi kungenziwa nge iziphazamiso okumbalwa / Ilula futhi okunomsoco - sokusetshenziswa emuva-friendly
Amahlamvu ukuqoqa ngaphandle ukuhwebelana njalo umquba: metal isondo lokuqobela encishisiwe ivolumu garden imfucuza maqondana 16: 1 / leaf cleaner luphinde manzi ukungcola ngokuqinile kwamandla
Ububanzi ukunikezela: 1 x 3in1 engadini vacuum cleaner omkhathi kanye leaf izimpimpi, 50l iqoqo isikhwama ivolumu shredder, wayibhinca ehlombe futhi ezengeziwe isibambo / Isisindo: 3.7 / 4.8 Kg / 2 iminyaka yesiqinisekiso
Bosch Laubsauger/Laubbläser UniversalGardenTidy (1800 Watt, Luftstromgeschwindigkeit: 165-285 km/h, im Karton)Anzeige
Isikhombi se-Gafde Vaforum ye-Güde 94395 1000 4T
I-vacuum yamaphepha anamandla eselula anamandla okusebenzisa umsebenzi nokushaya.
Ukulungiswa kokuphakama kwe-4-fold of the suction & blowing nozzle
Umzingeli wamaqabunga we-45 L
Injini yomjikelezo we-4
Ukusebenzisa amabhethri e-2 x 18V angenawo cord ayadingeka.
I-vacuum yamagatsha angasetshenziselwa ukusetshenziswa ensimini nasegcekeni
Ukushintshwa kweThuluzi kusukela ekutheni kuya emsebenzini wokushaya
Ngendlela yokulawula ijubane, ukuphakama okufisa komsebenzi wokuluthwa nokuqhuma kungalawulwa
Isikhwama se-Fang ngefasitela sivumela ukulawula kwezinga shazi
I-Monzana vacuum cleaner 4 ku-1 uphethiloli u-660m³ / h isikhwama sokuqoqa i-45L incl. Ithuluzi lisethela inkomba yeqabunga elihlanza i-shredder engadini
Umsizi Onamandla: Ngalesi sikhala seqabunga se-4in1 Monzana ungahlanza ingadi yakho, ithala lakho nezindlela zakho kusuka emaqabunga, amagatsha amancane namaphepha. Uncela amaqabunga ngomsebenzi we-suction bese uyinquma ngqo ku-1 12:45. Ekugcineni, amacembe abese ahanjiswa esikhwameni esikhulu sokuqoqa i-XNUMXL.
Inamandla futhi ilula: injini engu-26cm³ ine-1 HP futhi ingaqalwa kalula ngepompo eyinhloko. Ngenxa yohlelo lokulwa nokudlidliza nesibambo esiklanyelwe i-ergonomically, ukusebenza isikhathi eside nakho akunamsebenzi. Ukugcwalisa uwoyela nophethiloli kusebenza ngokushesha futhi kalula ngaphandle kwamathuluzi.
🍂 Eguquguqukayo: Isethi inezimpompo ezi-2 (ziqonde futhi ziqonde). Lokhu kukunikeza imiphumela efanelekile kuthambile (ipayipi eligobile) nobuso obunzima (obuqondile). Ishubhu egobekile ilungele ikakhulukazi izindawo ezinotshani obunamahlamvu. Lapha ukuhamba komoya kuhamba ngaphansi kwamaqabunga. Umbhobho oqondile ulungele ikakhulukazi indawo enzima. Kuvele uthuli namatshe lapha.
Change Ukushintshwa okusheshayo nokuthela: Idivaysi enamandla ingasetjenziswa njenge-vacuum, blower kanye ne-chopper. Max. Ijubane lenjini lingu-8500rpm kanye ne-max. Ijubane lomoya 265km / h.
Ope Ububanzi bokulethwa: I-1x 4in1 iqhuma blower | Uhlobo lweDrayivu: 2 unhlangothi - 40 （uphethiloli）: 1 (uwoyela) | kufaka phakathi amapayipi ahlukahlukene + izixhumi nethuluzi elisethwe nge-wrench wrench + cross screwdriver
I-FUXTEC petroli leaf blower FX-LB126 incl. I-2 blowpipes 2in1 function anwebeka ku-blow blower, ihlolwe inkomba ephezulu ye-1,4
Ukugqama kweqabunga leqabunga kungumsebenzi ophindiwe kabili! Sekuvele kufakiwe. Iziphephelo ezimbili zezabelo zomsebenzi ezahlukene
I-blowpipipe eqondile neyephunduwe yokuhlanza endaweni ehleliwe / engasenqatshiwe kanye nasemhlabathini ophansi, isibonelo ngotshani
Manje isisindo se-71m / s esiphezulu somoya esiphezulu ngenxa yesondo elisha nelikhulu, isitifiketi segesi sokusebenza okunethezeka eside, i-carburetor nepompo eyinhloko
ngokuzithandela: isaka elikhulu lokudonsa, uzipho olukhulu lwensimbi olwenziwe ngensimbi luqhekeza amahlamvu ku-12: 0
Isihloko sangaphambiliniUmeluleki we-Concrete Grinder